Ary i Afrika dia manana ny revolisiona maitso ihany koa? - Foundation Afrikhepri
Lizy Tetikasa Solar Roadways dia misy rakotra lalana, sisin-dàlana ary toeram-piantsonan-fiara miaraka amin'ny takelaka misy fakan-tsarimihetsika. Tsara ny panneaux solaires, fa ny fametrahana goavana kosa dia mitaky toerana malalaka. Noho izany ny hevitra hananana azy eny amin'ny habakabaka efa nampiasaina tamin'ny zavatra hafa.
Ity ny hevitr'i Scott Brusaw, injeniera amerikanina elektrika izay, tao an-tranony any Idaho, no nanangana ny tetikasa Solar Roadways mikendry ny handrakotra ny arabe, ny fiantsonan'ny fiara, ny sisin-dalana miaraka amin'ireo mpanangona angovo angovo avy amin'ny masoandro, afaka manaparitaka avy hatrany ny herinaratra vokarina ao amin'ny faritra manodidina, amin'ny fomba itsinjaram-pahefana tanteraka: trano, fivarotana, famantarana, jiro an-tanàn-dehibe.
Fanolorana ny tetikasa Solar Road Road
Scott Brusaw no nanomboka ny 21 tamin'ny volana Aprily fanentanana ho an'ny daholobe amin'ny alàlan'ny tranonkala Indiegogo. Tanjona: hanangona $ 1 tapitrisa amin'ny 31 May mba hifindra amin'ny dingana famokarana ny rafitra. Satria ny prototype dia efa novokarin'ny injeniera, ao amin'ny garazy misy azy, miaraka amin'ny fanampian'ny Federal Highway Administration izay, liana amin'ilay tetikasa, dia nanolotra vola 750000 XNUMX.
Maivana sy avo lenta
Mifanaraka amin'izany, ny Solar Roadways dia aseho ho toy ny fivorian'ny taila hexagonal 55 kg, vita amin'ny fanohanana plastika voaverina ary rakotra takelaka fitaratra. Notsapaina tamin'ny laboratoara izy ireo mba hahatanty ny fiatraikany, ny lanjany ary ny faneren'ny fiara (ny prototype dia manohana 125 taonina), ary ny haben'ny vera dia mamerina ny firafitry ny asfalta mba hisorohana ny fivelezana.
Solon'ny fanoherana ny solira
Ny takelaka iray dia misy mpanangona masoandro amin'ny 69% ny velarany amin'izao fotoana izao, nefa koa mampiditra rafitra fanimbana mitovy amin'ny an'ny varavarankely aorinan'ny fiara, ary ny LED natao hampiseho hafatra sy signal amin'ny tany.
Tsy mila hampihontsina ny drafitra an-tanàn-dehibe
Ny hexagon tsirairay avy dia misy ihany koa microprocessor mamela azy hifandray amin'ireo mpifanila trano aminy enina. Miasa amin'ny tambajotra iray noho izany ny fivoriambe, miaraka amin'ny tanjona ny hanaitra ny fampandrenesana raha sendra misy tsy fetezan'ny takelaka (na halatra).
Araka ny vinavinan'i Scott Brusaw, 31250 kilaometatra toradroa ny toeram-piantsonana, lalan-kely, kianja filalaovana, sisin-dalana, lalan-bisikileta sy ny sisa, na 80937 kilometatra toradroa, dia azo hararaotina any Etazonia nefa tsy manelingelina ny firafitry ny tanàn-dehibe na ny fikirakirana ny tamba-jotra.
Ary, raha ny filazan'ny injeniera hatrany, ny fitohanan'ny fifamoivoizana sy ny toerana fijanonan'ny fiara be olona dia tsy manakana ny rafitra tsy hiasa satria amin'ireny toe-javatra ireny dia misy velarana lehibe misarona foana, porofon'ireo sary an'habakabaka mahavariana ao amin'ny FAQ ny tranokalan'ny Solar Roadways.
Fahano ny planeta
17 ampiasaina amin'ny € 1,73
Vidio € 1,73
Nohavaozina farany tamin'ny 11 aprily 2021 7:39 maraina
Ny bokin'i Enoka, lahatsoratra taloha izay manambara ny fananganana an'izao tontolo izao
Arkeolojia voarara - Avy any Atlantis mankany amin'ny Sphinx (PDF)
Lova nangalatra (hatsaram-panahy)
Taratasy avy amin'ny Mahatmas (PDF)